Slovenian Tourism iri kuwedzera mushure meMambokadzi Queen Melanie Trump shongwe muSevnica inomusimbisa segamba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Slovenian Tourism iri kuwedzera mushure meMambokadzi Queen Melanie Trump shongwe muSevnica inomusimbisa segamba
Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Slovenia Kuvhuna Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Tourism kuSlovenia zvinoreva green Tourism. Shanduko yemamiriro ekunze ibasa hombe muSlovenia izvo zvinosanganisira iro guta diki reSevnica. Chii chine Washington DC chakafanana neiyi diki yeSlovenia Guta reSevnica? NaVaTrump vachirambana kubva muchibvumirano chemamiriro ekunze eParis, girini haigone kuve chikonzero chezvikonzero zvakajairika. Kufanana kutsva pakati pemaguta maviri aya hakusi kukura asi pamwe maguta ese ane zviyeuchidzo zvine mukurumbira.
Mutsamiro wepasi rose uye mikana yekushanya yeizvi Mumusha weSlovenia mumwe munhu vazhinji vanoona izvozvi seNyika Gamba reSlovenia. Iyo gamba ndiye mukadzi wekutanga weUnited States, Melania Trump, akaberekerwa muSlovenia weAmerica aimbove mufashoni. Akazvarwa muNovo Mesto saMelanija Knavs, Mukadzikadzi wekutanga akakurira muSevnica, muYugoslavia Republic yeSlovenia. Sevnica iguta riri kumahombekombe ekuruboshwe eSava River iri pakati peSlovenia. Iyi inzvimbo yekuzorora uye kufemerwa zvinoenderana neSlovenia Tourism.
MaSlovenia anodada neyaimbova mambokadzi werunako uye akaita kuti adiwe nekuyemurwa seMukadzi wekutanga weUnited States of America. Guta rake remunharaunda rakaburitsa chivezwa chakavezwa nemaoko nemusi weChishanu. Chiumbwa cheRusununguko muSlovenia chinoratidza Mai Trump vakashongedzwa mupfu yebhuruu sutu naRalph Lauren Unganidzo yavakapfeka kumurume wavo Donald Trump's kuvhurwa kwa2017, vachiita seanosimudza ruoko rwake.
Icho chifananidzo chakatumirwa neBerlin-based American muimbi Brad Downey uye chakagadzirwa naAles "Maxi" Zupevc, wemuSlovenia muimbi, uyo akashandisa chainsaw kugadzira mufananidzo weMukadzi wekutanga.
Vagari vemunharaunda vakapa maonero avo pamusoro pechiumbwa chaMelania Trump, icho chakasiyana nekuyemura kusvika pakuzvidza.
Sevnica chikamu chekare chiri pasi peSevnica castle pamusangano weCastle Hill, nepo chikamu chitsva cheguta chiri chakatambanudza pamwe nebani pakati pezvikomo kusvika kuSava Valley. Kwemazana emakore, guta re Sevnica yaive pamuganho pakati pematunhu maviri enhoroondo yeHabsburg Humambo: Carniola uye Styria. Yakatanga kutaurwa muzvinyorwa zvakanyorwa muna 1275. Mazuva ano guta iri inzvimbo yakakwana yekuzorora uye kubva kuguta rinotenderera. Inogara pamahombekombe erwizi Sava, makiromita makumi mapfumbamwe kubva kuLjubljana, guta guru reSlovenia.
“Sevnica nderimwe remataundi akotsira uko runyararo runongopunzika pano neapo neruzha rweinjini yemota inopfuura. Wakamira pakati peguta, unonzwa shiri dzichirira - hapana chimwezve. Imwe imba yezvigadzirwa, Sevnica ikozvino yave musha wevamwe vanhu zviuru zvishanu. Humwe chidimbu chehuswa chiri kuona chinotemwa zvakanaka, uye maruva ari kwese kwese, ”akanyora kudaro VICE Media muchinyorwa chayo muna Kubvumbi.
Guta rinozivikanwa Sevnica Castle uye yayo art gallery, iyo inobata akasiyana mamuseum uye kuunganidzwa kuratidzira. Iwe unogona zvakare kushanyira imwe yemachechi makumi mana nemana mudunhu kana nzvimbo yekuchera matongo kwenzvimbo yekutanga yevaKristu kubva muzana rechishanu kana rechitanhatu kuAjdovski Gradec pamusoro peVranje.
Pedyo, chikomo Lisca, pa947m pamusoro pegungwa, inoshamisa maonero, uye ayo mhepo inopisa anokwezva akawanda paraglider uye hang-glider. Iwe unokokwawo kuti uongorore iyo Bizeljsko-Sremiška uye Gornjedolenjska Waini Mugwagwa. Usakanganwa kuzvibata kune imwe inonaka mhando yewaini tsvuku uye masoseji akaomeswa, ayo ari emuno enzvimbo.
Mushure meMelania keke, Melania huchi, uye kunyangwe Melania slippers, guta rekuSlovenia remukadzi wekutanga weUS zvino vachazvirumbidza chifananidzo chemwanasikana wavo ane mukurumbira - kunyangwe iyo yakatarisana nemaonero akasanganiswa.
Chimiro chehukuru hwehupenyu kumucheto kweSevnica chakavhurwa neChishanu uye huro hwepfungwa yemakore makumi matatu nemasere ekuAmerica mugadziri Brad Downey, anoti ndicho chivakwa chekutanga chero kupi zvakapihwa kumukadzi weMutungamiri weUS Donald Trump
Icho chifananidzo chakavezwa mumuti uchishandisa ketani saha uye inoratidzira Melania akapfeka rokwe rebhuruu achisimudza ruoko rwake rweruboshwe muchiratidzo chekusimudza, achiteedzera poo yaakarova pakuvhurwa kwemurume wake muna 2017.
Maitiro ayo asina hunyanzvi akatungamira vamwe vatsoropodzi pamasocial media kuti vaiti "scarecrow."
"Ndinogona kunzwisisa kuti sei vanhu vangafunga kuti izvi zvinokundikana sekutsanangurwa kwechitarisiko chake," akadaro Downey, asi akasimbirira kuti awane mhedzisiro "yakanaka kwazvo."
Kubva Donald Trump atora chigaro muna 2017, Sevnica akarara ave magineti evashanyi nevatori venhau vachitsvaga ruzivo mune yakapfuura mudzimai wemukadzi wekutanga Vanamuzvinabhizimusi veko vanga vachiwana mari vachiuya, vachipa chikafu chinoshamisira cheMelania uye zvigadzirwa pamwe nekushanya kwenzvimbo inotora nzvimbo dzakakosha dzemakore avo ekutanga.
Downey akauya nemufananidzo uyu sechikamu cheprojekti yakanangana nekutsvaga midzi yemukadzi wekutanga weSlovenia midzi uye akatuma mhizha yemuno Ales Zupevc - anozivikanwawo se "Maxi" - kuti ave mufananidzo chaiwo.
Downey akati akarohwa nenyaya yekuti Maxi akazvarwa mugore rimwe chete uye muchipatara chimwe chete naMelania chaiye.
Akataura kuti kutaurirana naMaxi kwakamugonesa kuti aone dunhu ramadzitateguru aMelania kuburikidza nemaziso emuno.
"Unoona rwizi urwu rwaaizoona achiri mwana, unoona makomo," akadaro.
Nekudaro, haazi wese munhu akaendeswa kune wax lyrical nezve iyo mifananidzo.
Nika, mudzidzi wemunharaunda wemakore makumi maviri nemana ekuvaka mapurani, akati: "Kana iyo shongwe yaifanirwa kunge iri parody, saka muimbi akabudirira.
"Isu veSevnica tinogona kungoseka uye, panguva imwecheteyo, bata misoro yedu mumaoko edu pamusoro pezita ravo (raTrump) rine njodzi," akawedzera.
Katarina, ane makore makumi matanhatu nematanhatu anogara pedyo neRozno, akati anofunga kuti chivakwa ichi "izano rakanaka."
"Melania igamba reSlovenia, akazviita pamusoro muUS," akadaro.